About Us - Kingsign looxa
Sheet looxa qaro weyn
Sheet looxa Clear
Color looxa Sheet
Mirror looxa Sheet
Sheet looxa Frosted
Caafi Sheet looxa
Anti-Walac Sheet looxa
Anti-Laxoqo looxa Sheet
Anti-guurto ah Sheet looxa
Sheet looxa dabka
Diffuser looxa Sheet
Aragba looxa Sheet
Marmar looxa Sheet
Qaabka looxa Sheet
Pearl looxa Sheet
Wood Midho looxa Sheet
Clear looxa Tube
Color looxa Tube
Diffuser looxa Tube
Tube looxa Large
Light Guide looxa Tube
Clear looxa Rod
Color looxa Rod
Xumbo looxa Rod
Light Guide looxa Rod
Qaabka looxa Rod
Qaloocin looxa Rod
workshop sheet tuuray
sheet extrusion workshop
Furniture & Musqusha
Nalalka & Qurxinta
Calaamado & Display
Shirkadda ayaa soo bandhigay line ugu fiican adduunka ee si toos ah loo shubay iyo looxa extrusion-soo-saarka iyo "British Pilkington Glass" caaryada galaas British. Kingsign leedahay taariikh ah oo 15 sano oo duurka ku ah looxa, iyo ayaa ku salaysan wax soo saarka guddiga loo shubay-dhamaadka sare iyo qalabaysan line sare saarka Taiwan. Waxa ay ansixiyeen monomer MMA ay bixiyaan shirkadaha caalami ahaan caan oo waa polymerized by habka loo shubay-heerkulka sare. Iyada oo sumcad wanaagsan, waxaa jecel yahay sumcad sare in industry ee. Shirkadda ayaa ku raad-abuurnimo iyo horumar joogto ah.
In 2016, Kingsign looxa soo bandhigay afar khadadka-soo-saarka guddiga extrusion keeno-dhamaadka sare (laba xadhig saarka Talyaani sare iyo laba xadhig saarka Toshiba laga keeno), iyo madax-bannaan u horumarsan oo soo saaray taarikada extrusion-dhamaadka sare qoyska. wax soo saarka ee taarikada extrusion ansixiyeen kaabsal PMMA ay bixiyaan shirkadaha caalami ahaan caan. badeecada ku salaysan yihiin baahida suuqa of taarikada guide looxa light oo tayo sare leh ee maxalliga ah iyo kuwa dibadda. Iyada oo sumcad wanaagsan oo ku dhow in nidaamka adeeg suuq suuqa, shirkadda ayaa sidoo kale jecel yahay sumcad sare oo duurka ku of taarikada guide iftiin looxa. wax soo saarka waxay leeyihiin suuq wanaagsan oo heer sare ah sumcad brand, oo waxaa la fadilay by macaamiisha ee maxalliga ah iyo dibadda, iyo dhoofiyo Europe, America, Koonfur-bari Eeshiya iyo qaybo kale oo aduunka ah. On ku salaysan tayada deggan iyo waxqabadka sare, sheet Kingsign looxa ayaa suuqa wanaagsan sannado badan.
Kingsign looxa waa shirkad xirfadeed ku takhasusay ee soo saaridda iyo sale of sheets looxa, tuubooyinka iyo qataarradeedii. Warshadda ayaa waxaa ka Shanghai Anting Industrial Park si ay Gobolka Jiangsu dhaqaaqay. Warshadda wuxuu daboolayaa meel ka mid ah 60,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo uu leeyahay awood-soo-saarka sanadle ah oo 20,000 metrik. Waxaan ku adkeeyey shirkadaha ee Hong Kong, Shanghai, iyo Maraykanka, iyo Shanghai xafiisyada mas'uul ka ah iibka caalamiga ah iyo suuq leeyahay;
Sida had iyo jeer, Kingsign looxa wadi doontaa in ay u dhaqmaan ilaa mabaadi'da ganacsiga ee shirkadda ee "Tayada First Yimaado, Macaamiisha waa wada sarreeyey ah", waxaana naga go'an in ay iskaashi daacad ah, soosaarka xidhhidha, had iyo goorba wanaajiyo iyo naarta Saciira tamashle cusub si joogto ah.
Black Acrylic Rod, Tube looxa Large, looxa Guide dhengedihii , Clear Round looxa Rod, Adag oo cad looxa Rod, caaga Round Tube ,